I-35 EPHOLILEYO YEFAUX HAWK (IFOHAWK) YOKUCHEBA IINWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-35 Faux Hawk (Fohawk) Izinwele
I-faux hawk haircut, ekwabizwa ngokuba yi-fohawk, ngokulula yenye yeenwele ezipholileyo zamadoda. Kwaye zininzi iindlela zendlela yokufumana isitayile sefeksi…
I-faux hawk haircut, ekwabizwa ngokuba yi-fohawk, ngokulula yenye yeenwele ezipholileyo zamadoda. Kwaye zininzi iindlela zendlela yokufumana isitayile sefeksi. Ngokukodwa, i-faux hawk fade yinto elula kodwa eguqukayo yokwenza iinwele engakhange ibonakale inesitayile kunye neyangoku, kodwa ikuvumela ukuba uzame ezinye iindlela ezininzi. Kwaye, ukuba uyayithanda i-mohawk kodwa awufuni kucheba intloko, i-fohawk yamadoda ephelileyo yokucheba inwele isenokuba zezinwele osoloko uphupha ngazo.
Nokuba ufuna i-faux hawk ende okanye emfutshane, funda ukuze ufunde ngezona ndlela zintle zonyaka. Ukusuka kwi-undercut faux hawk ukuya kwi-frohawk yamadoda amnyama, esi sikhokelo siya kukunceda ukhethe ezona zisikiweyo zishushu kunye nesitayile seenwele zakho ezithe nkqo, ezijija okanye ezigobileyo!
1Yintoni iFaux Hawk Hairstyle?
MbiniMohawk vs Faux Hawk
3Uyenza njani isitayile i-Faux Hawk
4Fade Hawk Fade
5Izitayile eziphezulu zeFaux Hawk
5.2Ngaphantsi kweFaux Hawk
5.3Mfutshane Faux Hawk
5.4Long Faux Hawk
5.5UDavid Beckham Faux Hawk
5.7Ngaphantsi kweWavy Fohawk
5.8Yangamafu aMthubiweyo kaMessy Fohawk
5.9Uluhlu lweFohawk luphela ngeendevu
5.10I-Spiked Faux Hawk
5.11Ukuphela kweFohawk Taper
5.12Umbala weFaxux Hawk onamacala amfutshane
5.13Ulusu oluphezulu luphela kunye neFohawk emfutshane
5.14I-Hawks epheleleyo ngeFade ePhantsi
5.15Ukuqhuma kweFade Fawk kunye noMgca oPhezulu
5.16Ukuphela kweTaper ephezulu ngeFohawk
5.17Mfutshane Faux Hawk ngeFade kunye noyilo lweenwele
5.18Umbala weFohawk kunye neendevu
5.19I-Curly Faux Hawk Fade Edge Up kunye neendevu
5.20Ulusu oluphezulu luphela kunye neMilo ePhakamileyo kunye neFohawk ephezulu
Yintoni iFaux Hawk Hairstyle?
Ukusuka kwigama lesiFrentshi elithetha ubuxoki, ifeksi kweli gama lisikiweyo libonisa ukuba uya kuba uxelisa into-kule meko, i-mohawk. I-faux hawk kukuthathwa kweetoni ezantsi kwi-mohawk ebonakalayo, ukusikwa apho omabini amacala entloko achetyiwe acocekileyo, kushiya nje isiqwenga seenwele ezinde embindini. I-fohawk ibonakaliswe ngoluhlu olufanayo lweenwele ezinde, kodwa ikuvumela ukuba ushiye ezinye iinwele emacaleni (i-hawk), engekude nje ukuba ibiya kusikwa ngokwesiko.
Eyona nto intle malunga nokucheba iinwele ze-hawk kukuba ungabandakanya ukuphela okanye ukusika endaweni yentloko echetyiweyo. Kwaye kunye nefowk fade, abafana banikwa ukhetho lokutshintsha iinwele zabo ngamanye amaxesha. Umzekelo, ukuba i-hawks ende inolaka kakhulu eofisini, ungatshintsha nje isitayile sakho kwikama ngaphezulu kokuphela, ukubuyela umva, okanye isicatshulwa somyalezo. Ekugqibeleni, izitayile ze-faux ze-hawk zibonelela ngamadoda ngembonakalo eyahlukileyo.
Iitshathi ze-astro synastry
Umahluko ophambili phakathi kwe-mohawk kunye ne-faux hawk ilele ngendlela ezigqithise ngayo iinwele. Ngelixa ii-mohawks zivumela ukuba kungabikho zinwele emacaleni, ii-faux hawks zineenwele ezimfutshane okanye eziphakathi ubude emacaleni ezenza ukhetshe lubonakale. Yilapho i-fohawk taper fade ingena khona.
iintlobo zeenwele zomntu
Omnye umahluko obonakalayo kukuba lukhulu kangakanani unwele olusezantsi lweenwele ekufuneka lubekhona. I-mohawk yesiko ifuna umtya omncinci weenwele ezinde, ngelixa i-faux hawk inokuhamba nobubanzi obungqingqwa okanye obucekeceke.
Uyenza njani isitayile i-Faux Hawk
Zininzi iindlela zokwenza isitayile sefeksi. Kubaqalayo, ngokuqinisekileyo uya kufuna imveliso ekumgangatho ophezulu yeenwele ezinje nge-pomade okanye i-wax. Ukufumana kunye nesitayile se-faux hawk, uya kufuna:
Qala ngeenwele ezicocekileyo, ezomileyo.
Faka isicelo se-wax yeenwele okanye ipomade ngokulinganayo kwizinwele zakho, uyisebenze ngokupheleleyo.
Kuxhomekeka kuhlobo lwefeksi hawk ofuna ukuyenza isitayile, eli nyathelo elilandelayo lingahluka. Kwivolumu ebhaliweyo, sebenzisa isomisi sokuvuthela ukuhambisa iinwele zakho phezulu kunye nasembindini wentloko yakho. Ukufumana i-fohawk ethe kratya, sebenzisa izandla zakho ukutyhala iinwele zakho kunye.
Okokugqibela, yongeza imveliso xa ufuna ukomeleza ukubamba.
Isitshixo sokuhombisa i-faux hawk kukuzama kwaye ufumane isitayile esisebenzela phezulu. Abanye abantu bathanda ukunxiba i-hawk yabo kwicala elithile, ngelixa abanye bevumela amacala omabini ukuba aphakamise kwaye ahlangane embindini. Ukuba udiniwe kukwenza inwele ye-fohawk, ungadibanisa zonke iinwele zakho zibuyele kolunye uhlobo lolo suku.
Ukuba awukabikho kwindawo yokucheba iinwele, kuya kufuneka uphinde ucinge ngendlela yokusika amacala ezinwele zakho. Ukuba ujonga inketho epholileyo, yokugcina isezantsi kodwa ungafuni ukucheba iinwele zakho, i-faux hawk fade yeyona nto ilungileyo yokucheba iinwele kuwe. Khetha nje ukuphela okuphantsi okanye okuphezulu kunye nobude obufanelekileyo ukuze ubuzuze. Sincoma ukuphela kolusu oluphezulu ukwenza umahluko omkhulu kwizinwele ezingaphezulu.
iinwele ezintle zamakhwenkwe
Izitayile eziphezulu zeFaux Hawk
Iinwele zakho zezona zinto zichaza inkangeleko yakho, yiyo loo nto kungamangalisi ukuba amadoda amaninzi acinga ukuba kukude kwaye kunzima ukukhetha iinwele ezinomdla kwaye ezifanelekileyo. I-faux hawk yizinwele zale mihla eziza kuthandwa ngabafana kunye namantombazana.
Njengalo naluphi na usiko, eyona nto intle ukuyenza ngoku kukujonga kakuhle indlela abanye abanxibe ngayo i-faux hawk kwaye ubone ukuba zeziphi izinto onokuziboleka xa usenza i-hairstyle yakho. Nayi eminye imizekelo yeenwele ezimfutshane nezinde zeenwele esizikhethileyo ukuba uzisebenzise njengenkuthazo.
Ngaphantsi kweFaux Hawk
Mfutshane Faux Hawk
UDavid Beckham Faux Hawk
ukuchetywa kweenwele ezisezantsi kwe taper
Ngaphantsi kweWavy Fohawk
Yangamafu aMthubiweyo kaMessy Fohawk
Uluhlu lweFohawk luphela ngeendevu
I-Spiked Faux Hawk
Ukuphela kweFohawk Taper
Umbala weFaxux Hawk onamacala amfutshane
Ulusu oluphezulu luphela kunye neFohawk emfutshane
I-Hawks epheleleyo ngeFade ePhantsi
Ukuqhuma kweFade Fawk kunye noMgca oPhezulu
Ukuphela kweTaper ephezulu ngeFohawk
chiron kwi gemini
Mfutshane Faux Hawk ngeFade kunye noyilo lweenwele
Umbala weFohawk kunye neendevu
I-Curly Faux Hawk Fade Edge Up kunye neendevu
Ulusu oluphezulu luphela kunye neMilo ePhakamileyo kunye neFohawk ephezulu
ukucheba iinwele zamadoda kwizinwele ezigobileyo
ukuphuma kwenyanga kunye nomqondiso welanga
1 2 3 ukucheba iinwele